Deg Deg Daawo Video:SNM Oo Tidhi ‘Wali Dagaalka Tukaraq Oo kale Manan Arag Wax Lamid Ah’ | khaatumonews
Deg Deg Daawo Video:SNM Oo Tidhi ‘Wali Dagaalka Tukaraq Oo kale Manan Arag Wax Lamid Ah’
Jun 13, 2018 - 16 Aragtiyood
Wasiirka Arimaha debedda ee SNM Sacad Cali Shire oo Warbaahinta kula hadlay Hargeysa, ayaa ka Warbixiyey Halka ay marayso dhexaadinta Beesha caalamka ee xiisada dagaal ee Tukaraq, Taasi oo u dhaxaysa Puntland iyo SNM.
Wuxuu sidoo kale xusay inuu dagaalkani yahay mid aan Noociisu horey u dhexmarin labada dhinac Isagoo ka digay Dhibaatooyinka laga dhaxli doono. “Dagaal Noocan ah, oo Sidaas u Abaabulan, Wuxuu ina Marin doonaa Jid aan wanaagsanayn, Waxaan dadka Hurinaya ugu Baaqayaa inay Joojiyaan” ayuu Yidhi Sacad Cali
Wax kasta hala sheego ama halagu heshiiyo LAASCAANOOD IYO GAROWE XADUUD jeegaan ay leedahay marna lama kala dhex dhigaayo ilaahaygii dadka iyo dhulka abuuray baa sidaa kadhigay jeegaan gabilay iyo bariga burco katimid xaduud uma samayn karaan.
Waar miyaadan dalka joogin. Hadaba haddii aad qurbaha joogto aan kuu waramee looma kala socon kar Laascaanood iyo Garoowe. Baabuurta iyo dadku toona uuma kala gudbi karaan Laascaanood oo Somalilaan ah iyo Garoowe oo wali Majeerteeniya gacanta ku sii hayso.
Dagaaladii hore Majeerteeniya waxay ku daagaalmi jirtey magaca maamulkooda itaalka daran, laakiin markay ogaadeen in aaneey iska celin karin ciidanka qaranka iyo Khaatumo oo is garabsanaya, ayeey afka gacanta galiyeen oo ay dagaalkii gaadhsiiyeen shacabkii Dir iyo Daarood taas oo ah dhaqan aan hore u soo marin jamhuuriyadda Somaliland. Waxaan filayaa in imika fahamtay ujeedada wasiirka khaarajiga Somaliland.
Sacad cali shire ha la waydiiyo lacagtii Xaqul qalinka Berbera 20 milyan dollar halkuu geeyey iyo lacagtii raqiiska aheyd ee uu Berbera dekadeeda xabashi iyo carab ku siiyey …
SACADOOW KUWANI WAA NAF LA ‘CAARIYE YAAN LOO DIGIIGIXAN !!
WAAYO ILAA GAROOWE DIGAANDIGAHA LAGA DHIGO MA MIYIRSANAYAAN IYO REER IS MAQIIQ AAN MAYDKOODA GURAN KARIN.
ALLAW U SIYAADI JAMHUURIYADDA QARANKA SOMALILAND SOCOTEE.
Wuxuushta xuduud dhigaysa hawiyaha yaaban qosol bay ladgeceen. Jabuuti baayabtay hatgaysa ninka jooga oo lasano xuduudaha dhigayo. Ma oga miyaa in darood yahay qoomiyad kafacwayn waayaab.oo ma oga miyaa dhulbahante yahay jifo kamida harti. Balkawarama hadii burco puntland lasoo raac iyo. Habraha in lakalajaro ma ogola. See ifakareen harti xuduuda kaladgexdhig. Oo hadii caalamka kudiiday ma dadkaad ka caqli badan tihiin cajiib cajiib cajiib.
Naayaa Halgan quruxeey wasmo macaan.
Dhexdaan ku soo jiraa ee nigiska sii bixi oo waxan aad ku hadleeyso ka bax ileeyn Majeerteen ma dego Somaalilaane.
Haddii ay Majeerteeniya ay diido xadka caalamiga ah ee Yoocada ee Somaliland Somaliland, waa in GAROOW lagu soo daraa jamhuuriyadda Somaliland oo laga xukumaana Laascaanood.
xadka Yoocada ee u dhaxeeya Somaliland iyo Somalya ….
Wali weerar lagama hayo Majeerteenkii u baaqay Daarood oo dhan ee sidee wax u jiraan, ma ka baxayaan xadka Somaliland ee caalamiga ah mise halkooda ayaa loogu tagaa.
Wacade la isma gaarin ee midgaha aad meesha keenteen kala carara inta aan bakhtigooda dugaaga cunin viva pntlnd
Car iidoor mooyaane cidla kale sheega oo mar Bulshda caalamka, mar Ethiopia,mar UN,Ingriis, mar United Emarites, Mar Djabouti u carara.. hayaay hayaay hanala soo dhexgalo, nasoo farageliya dagaalku ha istaagee
in yar baa dhimane iska adkayso xaarkana cesho .. CAR XAARKA HA CESHADO IIDOOR WAGAASH OO CAALAMA UU U YEEDHANAYO HA ISKA DAAYO
in yar baa dhimane iska adkayso xaarkana cesho .. CAR XAARKA HA CESHADO IIDOOR WAGAASH OO CAALAMkA UU U YEEDHANAYO HA ISKA DAAYO
ASC Beelweynta Reer Aw Xasan (Asharaaf ta) Waxaan Ka codsanayaa Siyaasiyiintooda Saameynta leh sida Faarax Cabdiqaadir, Fahad Yaasiin iyo C/Weli Muudey inay Dagaalka Tukaraq Farageliyaan maadama iyaga dalka Soomaaliya SI Dedban inay Umaamulaan Lasheegay.
Muxuu yidhi iidoor abidkayo dagaalkan oo kale maanu arag fara haanu kaga gubanay oo madaxaanu kor u qaadi weeynay.
iidoor wuxuu moodayey baa la yidhi Gabiirsi oo ah reerka keliya ee uu ka adkaa.1991 markii dawladii kacaanka dhacday ee ay soo galeen waxay xasuuqeen Gabiirsi
Deg Deg::Itoobiya Amar Culus La Duldhigay.
Warbixin ay maanta soo saartay hey’adda Human Rights Watch ayaa lagu weydiistay dowladda Itoobiya ...
Deg Deg Daawo Video:Somaliland Ka Jawaabtay Dhaartii Puntland.
Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka tirsan Xildhibaanada golaha wakillada Maamulka Somaliland ayaa ...
Deg Deg Daawo Sawiro”Ciidaamo Ka Goostay Somaliland Ku Biiray Taliska Caare,
Saldhiga military oo maamul goboleedka putland ka siiyeen ciidamo uu dhowaan la goostay sarkaal ...